दिनभरको कामले थकित हुनुहुन्छ ? फिटनेसका लागि यस्तो गर्नुहोस्! - News Bihani
आइतवार, मंसिर १, २०७६ Sunday 17th November 2019
दिनभरको कामले थकित हुनुहुन्छ ? फिटनेसका लागि यस्तो गर्नुहोस्!
प्रकाशित मिति : आइतवार, कार्तिक २४, २०७६
दिनभरी हुने भागदौड र कामको थकानका कारण कतिपयलाई रातमा समेत निद्रा नलाग्ने समस्या हुनसक्छ । तर जब तपाई राम्रोसँग निदाउनुहुन्छ तब निद्रासँगै तपाईमा रहेको तनाव पनि हराउँछ । तर केही व्यक्तिहरुलाई कामको तनाव आवश्यता भन्दा बढि पर्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा तनाव कम गर्न के गर्ने रु हामी तपाईलाई कामको तनाव कम गर्ने उपायबारे जानकारी दिदैछौं ।
कामको तनाव कम गर्न यस्तो गर्नुहोस्
खाली खुट्टा हिड्नुस्स् घरवरपर हिड्नुपर्दा खाली खुट्टा हिड्ने बानी गर्नुभयो भने तपाईको रक्तसञ्चार प्रीक्रयामा सुधार हुन्छ । जसले तपाईलाई तनावबाट छुटकारा मिल्छ ।
घरमा अफिसको कामको तनाव नलिनुस्स् यदि तपाई घरमा पनि कार्यलयकै कामको विषयमा सोचेर बस्नुहुन्छ भने तपाईलाई तनाव हुन्छ । त्यसैले घरमा भएको समयमा घरको काम र पारिवारीक वातावरणमा रमाउन सकेमा कामको तनावबाट मुक्ति पाइन्छ ।
अफिसबाट घर गएपछि शान्त वातावरणमा केही समय बस्नुस्स् दिनभरी काम गरेर घर गएपछि हातमुख धोएर फ्रेस भएपछि कम्तिमा आधि घण्टाजती घरको शान्त वातावरण वा घरको सतमा समय विताउनस् । परिवार वा साथीहरुसँग कुराकानी गर्नुस् । यस्तो बानीले तपाईको कामको तनाव कम हुन्छ ।
कार्यलयबाट घर गएर केही समय आरामा गर्नुस्स् हरेक दिन कार्यलयबाट फर्किएपछि १५ देखि २० मिनेट सम्म शान्त वातावरणमा आरम गर्दा शरीरमा नयाँ उर्जा प्राप्त हुन्छ र तपाईको थकान कम हुन्छ ।
बाथरुममा गीत गाउँदै नुहाउनुस्स् कार्यलयबाट घर फर्किएपछि तपाई थकान महसुस गर्नुहुन्छ भने बाथरुममा गित गाउँदै नुहाउनस् । यस्तो बानीले तपाईको तनाव कम हुन्छ । नयाँ उर्जा मिल्छ ।
धेरैथरी काम नगर्नेस् एकैसमयमा धेरै थरी काम गर्ने, मोवाइल वा ल्यापटन चलाउदै घरको काम गर्ने, फोनमा कुरा गर्दै काम गर्ने बानी धेरैको हुन्छ । यस्तो बानीले तपाईको दिमागमा थकान अझै बढाउँछ । त्यसैले एउटै काममा मात्रै ध्यान दिदा उपयुक्त हुन्छ । आफुलाई चाहिने कुरा मात्रै सोच्ने बानीले तनाव कम हुन्छ ।
आफ्नो बारेमा पनि सोच्नुस्स् आफुलाई खुसी लाग्ने, रमाइलो अनुभव हुने कुराहरु सोच्नुस् । यस्तो बानीले तपाईमा भएको तनाव कम हुन्छ । मन र दिमाख दुवै स्वस्थ र खुसी लाख्छ ।
यस्तो सपना देख्नु भो ? बुज्नुहोस सम्वृद्धि र धन प्राप्त हुँदैछ !
शारी*रिक स*म्प*र्कबारे तपाईलाई थाहा नभएका र भएका हालसम्म भेटिएका यी १६ तथ्य, हेर्नुहोस् !
सपनाको संकेत : कुन सपना देख्दा कस्तो फल मिल्छ एकपटक पढौ
यी राशिको यो हप्ता चम्कनेछ भाग्य ? हेर्नुहोस !
लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी अतिक्रमण : १४ वर्षअघि नै राष्ट्रसंघमा
सञ्चालनमा रहेकामध्ये ४१ विमानस्थल घाटामा, ८ नाफामा
दसगजा मिचेर कतै पसल, कतै खेतीपाती
आज यी राशिको चम्कनेछ भाग्य ? हेर्नुहोस !
के तपाइलाइ आफ्नो जिबनसथीको व्यवाहार मन पर्दैन ? यसो गर्नुहोस !
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी प्रा लि बिच सम्झौता
अनुगमन सुस्त हुँदा पर्नै छाड्यो कालाबजारी मुद्दा
गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट : लिज अवधि थप्न चलखेल